Samsung Galaxy A90 5G gosipụtara na ntinye akwụkwọ ya | Gam akporosis
Samsung Galaxy A90 5G pụtara na-egosi na akwụkwọ ọkwa ya
Kemgbe el Galaxy A90 nwere nkwado 5G gbaara ihe dika izu ato gara aga, atụmanya ndị bilitere gburugburu ngwaọrụ a na-eto eto na ụbọchị na-agafe. Ọtụtụ data gbasara ihe ndị nrụpụta South Korea kwadebere maka anyị na ngwaọrụ a apụtaala, ihe a na-apụ apụ ugbu a bụ akwụkwọ ọkwa gọọmentị, nke na-egosi ya n'ịma mma ya, yabụ imepụta ya na mma ya - n'azụ na n'ihu - gosipụtara ọzọ.
A na-atụ anya ka ekwentị a jiri otu usoro Qualcomm kachasị elu System-on-Chip, nke bụ Snapdragon 855. Geekbench abụwo otu n'ime ndị na-akpata atụmanya a, n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya ọ kọwara ya n'usoro nyocha ya na chipset a. Mana nke ọma, na-echezọ ntakịrị gbasara atụmatụ na nkọwa nke Galaxy A90 5G, ka anyị gaa na ihe dị anyị mkpa ugbu a, nke bụ ya Ihe nkwado. Lelee ya n'okpuru!
Samsung abughi onye biputara akwukwo a nke Galaxy A90 5G ma obu onye oru ọnụ mmiri site na Twitter. Maka nke a, ọ ka dị mma ikwu nke ahụ Nke a bụ ihe ngosi ọkwa gọọmentị pụtara. Agbanyeghị, ihe niile na-egosi na ọ bụ eziokwu, ya mere anyị nwere ike ịtụkwasị obi n'ihe ọ na-egosi.
Akwụkwọ ngosipụta gọọmentị pụtara nke Samsung Galaxy A90 5G hụrụ
Achọpụtala ngwaọrụ n'okpuru koodu nlereanya «SM-A908N». N'ime oge ọhụụ a, ekpughere ya na atụmatụ ihu igwe zuru oke na-enweghị ntụpọ, yana igwefoto igwefoto atọ edobere n'ụzọ kwụ ọtọ n'akụkụ aka ekpe nke elu nke azụ ya yana ọkụ LED. Ihuenyo enweghị obere oke, ọ na-abịa na ọkwa mmiri, na onye na-agụ mkpịsị aka wuru n'ime onwe ya.
Leaked ọhụrụ nkọwa banyere Galaxy A90
Dị ka aha ya na-egosi, Njikọ 5G agaghị ahụ anya site na enweghị ya na ama a. Mwepụta nke ya ekwesịghị ịdị anya, yabụ n'oge na-adịghị anya, anyị ga-akwado ihe niile ekwuru na ndị ọzọ. Ọ ka ga-ama mgbe Samsung ga-ahapụ ya na eze.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy A90 5G pụtara na-egosi na akwụkwọ ọkwa ya
Nokia na-ere okpukpu atọ karịa ekwentị karịa ekwentị
Ihe egwu Anime Otu-Punch: tozọ na-aga Hero dị ugbu a na gam akporo: anyị nwalere ya